အီးမေးလ်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှကြိုဆိုသည့်သင်ခန်းစာများ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ KC Karnes
ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်လက်မှတ်ထိုးပြီးလျှင်တစ်ချိန်တည်းတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကထင်မြင်ယူဆကြသောကြောင့်ကြိုဆိုသည့်သတင်းစကားသည်အသေးအဖွဲဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများအားလမ်းညွှန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ဖြစ်သည် တစျခုလုံးကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးပွားစေရန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည် ဖောက်သည်တစ်သက်တာတန်ဖိုး.
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုမှာပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဤပထမဆုံးထင်မြင်ချက်သည်မျှော်လင့်ချက်များထားရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ မပြည့်စုံပါကဖောက်သည်များသည်သူတို့၏ခရီးကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီများစွာသည် onboard ပြုလုပ်ခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးကိုပေးနိုင်သည့်နေရာများစွာမှသုံးစွဲသူများကိုပညာပေးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၀ ယ်ယူသူများကိုဤအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်တင်းရန်အတွက်ငွေဇွန်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်အောင်မြင်သောကြိုဆိုသည့်သတင်းစကားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းများမှာအဘယ်နည်း။ သုံးစွဲသူများကိုအောင်မြင်စွာ ၀ င်ရောက်စီးနင်းနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုလေ့လာခြင်းမှကြိုဆိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဆင်တူသည်။
သင်၏အီးမေးလ်ကြိုဆိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများအတွင်းဤနည်းဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အီးမေးလ်များကိုတစ် ဦး တည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖွင့်လှစ်နှုန်းထားများတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် 26%.
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအီးမေးလ်မှာအမြင်အာရုံအတွင်းရှိလှုပ်ရှားမှုကာတွန်းများကိုမျက်စိကိုမြန်ဆန်စွာဆွဲဆောင်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် GIF များသည်ဖိုင်အရွယ်အစားသေးငယ်စေပြီး HTML မြန်ဆန်မှုနှုန်းကိုမြန်ဆန်စွာထိန်းညှိပေးသော frames အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
ရည်ညွှန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စီးပွားရေးအားမြှင့်တင်ရန်ကြိုဆိုသည့်သတင်းစကားတွင်နောက်ထပ်ပါ ၀ င်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏မကြာသေးမီကလက်မှတ်ထိုးခြင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့် ၀ ယ်ခြင်းများပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်အပြောင်းအလဲအရှိဆုံးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအီးမေးလ်သည်ဤမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောရည်ညွှန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုမှာနှစ်ဖက်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မျှဝေနေသောဖောက်သည်နှင့်၎င်းတို့၏လက်ခံသူအားလွှဲပြောင်းမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်မက်လုံးပေးသည်။
ဤကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အတွက်ဖြစ်သည် အီးမေးလ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ကျန်းမာသောအသုံးပြုသူ onboarding နှင့်အပြုသဘောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ကြိုဆိုသောသတင်းမဟာဗျူဟာကိုလမ်းညွှန်ရန် CleverTap မှအောက်ပါပုံကိုသုံးပါ။
Tags: အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျအကြံပေးချက်များအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကို onboardingမက်ဆေ့ခ်ျကို onboardingလွှဲပြောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုဆိုသတင်းစကား
KC Karnes Wednesday, January 2, 2019 Wednesday, January 2, 2019
KC Karnes သည်လူသိများသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Silicon Valley ရှိအပူဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီများ၊ CleverTap, Intelligent အပါအဝင် မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
Omnichannel စျေးကွက်သည် ပို၍ သစ္စာစောင့်သိပြီးတန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များရရှိသည်
အသစ် Martech Zone 2019 အတွက်လိုဂို